चिट्ठा परेको भन्दै १० लाख बढी ठगी, आईएमई र मनिट्रान्सफर सञ्चालकको मिलेमतो ! - Everest Dainik - News from Nepal
चिट्ठा परेको भन्दै १० लाख बढी ठगी, आईएमई र मनिट्रान्सफर सञ्चालकको मिलेमतो !
धनगढीः चिट्ठा परेको भन्दै १० लाख ठगी गरेको आरोपमा सात जना पक्राउ परेका छन् । ठगीमा आईएमई सञ्चालकको समेत मिलेमतो रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।
२५ लाख चिट्ठा परेको भन्दै कैलालीको घोडाघोडी–६ बस्ने धनकला धामीको मोबाइलमा मेसेज आयो । उक्त पैसा पाउनको लागि तपाईंले करबाफत रकम तिर्नु भनियो ।
उनले उक्त मेसेजलाई पत्याइन् । उनले पटकपटक गरेर १० लाख ४० हजार पठाइन् । फेरि एक लाख २० हजार रुपैयाँ मोरङ्गका बिक्रम चौधरी र नारायण चौधरीको नाउँमा पठाई दिन भन्दै मेसेज आयो ।
लगातार पैसाको माग भएपछि शंका लागेर धनकलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा उजूरी गर्नि । त्यसपछि अनुसन्धान थालेको प्रहरीले भारतीय नागरिक र आईएमई तथा मनिट्रान्सफर सञ्चालकको मिलेमतो ठगी भएको पत्ता लगायो र त्यसमा संलग्न सात जनालाई पक्राउ गर्न सफल भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा प्रवक्ता दक्ष कुमार बस्नेतका अनुसार उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको सहयोगमा पक्राउ गरिएको हो ।
ट्याग्स: आईएमई, कैलाली जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली, ठगी, मनिट्रान्सफर